Nagu saabsan - Kuleylka Elektaroonigga Co., Ltd.
Hot Electronics Co., Ltd. waxay u heellanaysay qaabaynta tayo sare leh nashqadeynta & soosaarida in ka badan 18 sano.
Si buuxda loogu qalabeeyay koox xirfadlayaal ah iyo tas-hiilaad casri ah si loo soo saaro badeecadaha soo-saarka wanaagsan ee LED-ka, Kuleylka Elektaroonigga ah wuxuu sameeyaa alaabooyin laga helay codsi ballaaran oo ku yaal garoomada diyaaradaha, saldhigyada, dekedaha, jimicsiyada, bangiyada, dugsiyada, kaniisadaha, iwm.
Wax soosaarkayaga LED-ka ayaa si ballaadhan ugu faafay waddammada 100 adduunka oo dhan, oo daboolaya Aasiya, Bariga Dhexe, Ameerika, Yurub iyo Afrika.
Laga soo bilaabo garoonka ilaa saldhigga TV, illaa shirarka & dhacdooyinka, Kuleylka elektiroonigga ah wuxuu bixiyaa noocyo badan oo indho-qabad leh iyo tamarta xalka shaashadda LED-ka ee suuqyada warshadaha, ganacsiga iyo kuwa dawliga ah ee adduunka.
Waxaan aad ugu faraxsanaan lahayn inaan qaabeyno shaashad gaar ah oo loo yaqaan 'LED screen' iyo xalka si wadajir ah adiga. Haddii loo adeegsado sumadeynta, xayeysiinta, madadaalada ama farshaxanka, Kuleylka Elektiroonigga ah ayaa ku siin doona xalka LED-ka kaas oo hubin doona in maalgashigaagu si wanaagsan kuugu adeego sannadaha soo socda.
Noqo soo saaraha wax soo saarka heerka koowaad ee LED
Noqo hormuudka saldhig caalami ah ee wax soo saarka LED-ka
Noqo qof khabiir ku ah tayada wax soo saarka LED ee nashqadeynta, cilmi baarista ＆ horumarinta, nidaamka xakamaynta.
Hot Electronics Co., Ltd. waa shirkad hoosaad ka ah Hongkong Tian Guang Electronics Co., Ltd., oo la aasaasay 2003, waxayna leedahay taariikh ku saabsan 18 sano. Hot Electronics Co., Ltd. waa shirkad heer-sare ah oo teknoolojiyad ku takhasustay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka iyo adeegga alaabada bandhigga LED-ka.
Hot Electronics Co., Ltd. waa shirkad horseed u ah alaabooyinka arjiga LED-ka iyo xalka dibedda. Waxaan haynaa R & D dhameystiran, wax soo saar, iibin iyo nidaam adeeg. Waxaa naga go'an in aan siino wax soo saar tayo sare leh oo tayo sare leh oo muujinaya wax soo saarka muuqaalka LED-ka iyo xalka loogu talagalay isticmaaleyaasha dal iyo dibadba Waqtigan xaadirka ah, badeecadaha ayaa badanaa daboolaya shaashadda midabkeedu yahay midabka buuxa, shaashadda midabka leh ee khafiifka ah, shaashadda hoggaamineed ee kirada, qeexitaanka sare ee muuqaalka kore ee yar yar iyo taxane kale. Alaabada waxaa loo iibgeeyaa Yurub iyo Mareykanka, Bariga Dhexe iyo dalal kale iyo gobollo. Waxaa si weyn loogu isticmaalay goobaha isboortiga, raadiyaha iyo telefishanka, warbaahinta dadweynaha, suuqa ganacsiga iyo ururada ganacsiga iyo xubnaha dowladda iyo meelaha kale.
Hot Electronics Co., Ltd. waa shirkad xirfadlayaal u ah adeegga tamarta waxayna gashay liiska dufcaddii afraad ee shirkadaha adeegga ilaalinta tamarta ee Komishanka Horumarinta iyo Dib-u-habeynta. Hot Electronics Co., Ltd. waxay leedahay koox suuq geyn leh khibrad ballaaran oo EMC ah iyo koox maareyn tayo sare leh si ay u siiyaan macaamiisha hantidhawrka tamarta xirfadeed, naqshadeynta mashruuca, maalgelinta mashruuca, soo iibsiga qalabka, dhismaha injineernimada, rakibaadda qalabka iyo howlgelinta, iyo tababarka shaqaalaha. .
Sanadkii 2009, Hot Electronics Co., Ltd. waxaa loo xushay inay noqoto qeybta iskaashiga mashruuca ee "Barnaamijka 863" ee "Qorshaha Shan-iyo-Tobnaad". Intaa waxaa dheer, mashaariicda la xiriirta soo bandhigida shirkadeena LED-ka waxaa lagu qiimeeyay "Top 500 Mashruucyada Warshadaha Casriga ah ee Guangdong" iyo "Top 500 Mashruucyada Warshadaha casriga ah ee Guangdong" waa "Mashruuca Koowaad" ee istiraatiijiyadaha soo-baxa istiraatiijiga ah ee Guddiga Xisbiga Guangdong Gobolka iyo Gobolka. Dowlada.
Bishii Ogosto 2010, Hot Electronics Co., Ltd. waxay aasaastay Shenzhen LED Display Technology Engineering Research and Development Center oo ah hogaamiyaha iyo hogaamiyaha farsamada ee warshadaha LED-ka ee Shenzhen, waxaana ansixiyay Shenzhen Science and Technology Industry iyo Ganacsiga iyo Teknolojiyada Macluumaadka.
Sanadkii 2011, Hot Electronics Co., Ltd. waxay ka aasaastay xafiiska ganacsiga ganacsiga ajaanibta magaalada Wuhan, Hubei.
Sanadkii 2016, Hot Electronics Co., Ltd. LED Display P3 / P3.9 / P4 / P4.8 / P5 / P5.95 / P6 / P6.25 / P8 / P10 iwm hel shahaadooyinka CE, RoHS.
Hot Electronics Co., Ltd. waxay mashaariic ka fulisay 180 dal oo adduunka ah. Waxaa ka mid ah, 2016 iyo 2017, laba TV oo waaweyn ayaa laga furay telefishanka Qadar, iyadoo wadar ahaan bedkiisu yahay 1000 mitir murabac.
Naadiga, aagga garoonka, fagaaraha dhaqanka, jidadka ganacsiga, aagga madadaalada, masraxa farshaxanka, xarumaha carwooyinka, muuqaalka dhirta magaalooyinka, shirkadaha iyo hay'adaha, maamulka iyo qaybaha kale.
Himilada adeegga: Degdeg, Waqtiga ku habboon, Macaamiisha ugu horreysa
1. Baaritaan bilaash ah kahor iyo kadib iibinta. 2. Garanti: 2 sano. 3. Dayactir iyo dayactir. Ka jawaab waqtiga (4 saacadood gudahood). Dayactir 24 saac gudahood ah cilad guud, 72 saacadood goosad goosad Joogto joogto ah. 4. Bixinta dayactir iyo khidmadaha farsamada ee muddada-dheer. 5. Taageerada tignoolajiyada ee waxqabadka muhiimka ah iyo barnaamijyada. 6. Cusboonaysiinta nidaamka bilaashka ah. 7. Tababar lacag la’aan ah.
1. Wadatashiga mashruuca 2. Soojeedinta dhismaha 3. Kaaliyaha rakibaadda goobta 4. Injineer tababbarka hawlgalka joogtada ah
Dammaanad Laba Sano ah: Muddo dammaanad ah 2 sano gudahood, qayb kasta oo ka mid ah fashilaadda waa la beddeli karaa bilaash oo ma aha sababaha loo isticmaalay. 2 sano kadib, kaliya kharashaadka qaybaha ayaa la soo dalacayaa.
Marka loo eego qaababka wax lagu duubo ee kala duwan, xirxirida kartoonka, xirxirida kiiska duulimaadka.